Isaya 27 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
27 Ngalolo suku uJehova,+ ngenkemba yakhe eqinile nenkulu futhi enamandla,+ uyomnaka uLeviyathani,+ inyoka eshibilikayo,+ yebo uLeviyathani, inyoka egwegwile, futhi ngokuqinisekile uyosibulala lesi silo sasolwandle+ esisolwandle. 2 Ngalolo suku mhlabeleleleni lona wesifazane,+ nina bantu, nithi: “Isivini+ sewayini elinengwebu! 3 Mina, Jehova, ngiyamlonda.+ Ngizomnisela umzuzwana ngamunye.+ Ukuze kungabikho omnakayo ukuba amelane naye, ngizomlonda ubusuku nemini.+ 4 Angifuthekile neze.+ Ubani ozonginika iminga+ nokhula empini? Ngizohamba phezu kwako. Ngizokuthungela ngomlilo ngasikhathi sinye.+ 5 Ngaphandle kwalokho makabambelele esiphephelweni sami, makenze ukuthula nami; ukuthula makakwenze nami.”+ 6 Ezinsukwini ezizayo uJakobe uyomila izimpande, u-Israyeli+ uyoveza izimbali futhi empeleni ahlume; uyomane agcwalise ubuso bezwe elikhiqizayo ngomkhiqizo.+ 7 Ingabe kudingeka umuntu amshaye ngomvimbo onjengowomuntu omshayayo? Noma ingabe kudingeka abulawe ngokucekwa okunjengokwababuleweyo bakhe?+ 8 Uyophikisana naye ngokumemeza okwethusayo lapho umthuma. Uyomxosha ngokufutha kwakhe, okunamandla ngosuku lomoya wasempumalanga.+ 9 Ngakho-ke ngale ndlela isiphambeko sikaJakobe siyohlawulelwa,+ yiso sonke lesi isithelo esiba khona lapho esusa isono sakhe,+ lapho enza wonke amatshe e-altare ukuba abe njengamatshe kashoki acoliwe, kangangokuba izigxobo ezingcwele+ nezinti zezitsha zempepho ngeke zivuke.+ 10 Ngoba umuzi onezivikelo eziqinile uyokuma wodwa, idlelo lishiywe dengwane futhi lishiywe njengehlane.+ Ithole liyoklaba khona, liyolala khona; futhi uyodla amagatsha awo.+ 11 Lapho amahlumela awo esomile, abesifazane abezayo bayowaphula, bawokhele.+ Ngoba akusona isizwe esinokuqonda okubukhali.+ Yingakho uMenzi waso engeke asibonise isihe, noMbumbi waso ngeke asibonise umusa.+ 12 Ngalolo suku uJehova uyovuthula izithelo,+ kusukela emfudlaneni ogelezayo woMfula+ kuya esigodini sesifufula saseGibhithe,+ kanjalo nani niyobuthwa omunye ngemva komunye,+ madodana ka-Israyeli. 13 Ngalolo suku kuyoshaywa uphondo olukhulu,+ futhi labo abashabalalayo ezweni lase-Asiriya+ nalabo abahlakazekile ezweni laseGibhithe+ ngokuqinisekile bayoza futhi bakhothame+ kuJehova entabeni engcwele eJerusalema.+